Uyisibonelo esiphilayo uMoleko akenzi ngamlingo - Bayede News
Uyisibonelo esiphilayo uMoleko akenzi ngamlingo
Abantu abaningi abaphila ngemali yomkhakha wezokungcebeleka bahlezi lubhojozi ngenxa yokuhlasela kweCovid-19 evale thaqa ukusebenza kubantu.
Kukhulunywa nje unobhutshuzwayo umisiwe emazweni omhlaba ngokunjalo nePremier Soccer League (PSL) yaseNingizimu Afrika izilile kuze uHulumeni acacise ukuthi sekungabuyelwa yini ensimini.
Ukumiswa kukanobhutshuzwayo sekugadle kwezwela kwamanye amakilabhu anjenga-AmaZulu FC neCape Town City kangangokuba asememezele ukuthi azokwehlisa imiholo. Amanye agijima kuGladAfrica Championship aseqalile ukuholela abadlali nezinye izisebenzi imali encozuliwe.
Kukhalwa ubumayemaye njengoba kukhulunywa nje abanye abadlali basaba ngengcuphe yokudlelwa izimoto kanti nezikweletu ziyaqonga.
Lesi sikhathi sikathaqa simthole evivile uKgotso Moleko njengoba kubukeka alandela umyalelo waseBhayibhelini wokuthi kumele ivila libukele entuthwaneni.
Lo mdlali weKaizer Chiefs akashayekile ephaketheni njengoba kunemali engenayo ebhizinisini lakhe lokufuya ngasezintabeni zangakubo eBloemfontein, eFree State.
Kuleli bhizinisi ufuye izinkomo, izimvu, izingulube, izinkukhu futhi utshale ummbila athi kuthengwa ubuthaphuthaphu ngalesi sikhathi.
Uthi amakhasimende akhe amakhulu yizitolo ezinkulu zaseBloemfontein abuye ahwebe emazweni anjengeLesotho neZimbabwe.
UMoleko oneminyaka yobudala engama-30 ozophelelwa inkontileka yakhe kuChiefs ngoNhlangulana mhla zingama-30, udalule ukuthi yize kuleli qembu bengehliselwanga imiholo kodwa ukungena kwemali yebhizinisi lakhe kumenza alale ekhululekile.
“Akubuzwa ukuthi lolu bhubhane lugadle kwezwela kwezomnotho, ingakho ozakwethu basemkhakheni wezokungcebeleka bekhala kanje. Kodwa-ke kwesinye isikhathi kuhle ukwazi ukuthi ufuna ukuzuzani empilweni. Imali engayithola ngifika ebholeni elikhokhelayo kuBloemfontein Celtic ngowezi-2000 hleze ngangingayisaphaza ngokuthenga izimoto ezibizayo ngoba senginabangani abaningi abalandela imali yami kodwa ngaba nenhlanhla yokuzwana nabantu abanomqondo ojulile nowebhizinisi ingakho ngaqoma ukungena ekufuyeni,” kusho uMoleko oseneminyaka eyisi-8 ekuChiefs.
Eqhuba uthe: “Kumuntu obukela kude abadlali bebhola ucabanga ukuthi impilo kubona iwubukhazikhazi ngaso sonke isikhathi. Yebo kona kumnandi ukuba semehlweni abantu uthole udumo kodwa abanye ozakwethu abakukhohlwayo ukuthi ebholeni awudlali uze ube ikhehla lakhona. Kwesinye isikhathi ungaphuka bese kuyaphela ngawe noma uvele uphenduke iqaqa kwamanye amaqembu usuhluleka ukuthola inkontileka usudedelwe ikilabhu obusudlale kuyo isikhathi eside. Ingakho kimina kumqoka ukusebenza kusakhanya ngoba ikusasa angeke uliqagule.”
Enaba ngasekufundile kuleli bhizinisi lakhe, uthe ukuthola umhlaba ongamahektha ama-3.9 kumele uhlukane cishe nezi-R225 000.
Abalelwa ezigidini ezingama-R200 amahektha ayizi-2548.
“Kuningi okuhle okutholayo ngendlela uma ungena kwezolimo. Ngokocwaningo, umlimi waseNingizimu Afrika uyayenza inzuzo cishe yezi-R277 500. Kumele wenze ucwaningo olunzulu ubuze nakwabaphambili,” usho kanje.
Njengoba iChiefs isamile ekuziqeqesheni, uMoleko uzivocavoca ngayedwana ngokulandela umyalelo anikwe wona nozakwabo yithimba labaqeqeshi ukuze babuye bengumqemane.
Uma unqwamana naye epulazini ungaphika ucabange ukuthi akuyena lo mdlali ovamise ukubonakala ensimini egadulisana nabagadlali.
Usuke engasathi nsi uma esedlubhe isigqoko esiwukhakhi namabhuzu, ezulazula kuhle kwebhunu epulazini lalo.